IRS နှင့်ဘဏ္Treာရေးဘဏ္2ာငွေ ၂ သန်းကျော်သည်အမေရိကန်ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်အရစီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုပေးချေမှု - VA အကျိုးခံစားသူများသည်စုစုပေါင်းအားဖြင့် ၁၅၉ သန်းကိုပေးချေမှုများဆက်လက်တိုးပွားလာစေသည် - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B159B စျေးကွက်သတင်း
ဧပြီလ 15, 2021 ဧပြီလ 15, 2021 Filomena Mealy စီးပွားရေး, အသားပေးသတင်းများ, သတင်းဆောင်းပါး
• IRS၊ ဘဏ္theာရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်ဘဏ္Serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုဌာနမှအမေရိကန်ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်မှပဉ္စမမြောက်စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများပေးချေမှုတွင်ငွေပေးချေမှု ၂ သန်းနီးပါးကိုထုတ်ပေးနေသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
•Theပြီ ၉ ရက်သောကြာနေ့၊ တရားဝင်ငွေပေးချေသည့်နေ့ရက်နှင့်အတူ ၅ ခုမြောက်ငွေပေးချေမှုသည်someပြီ ၉ ရက်သောကြာနေ့တွင်စတင်ကာအချို့သို့မဟုတ်အချို့သောသူများသည်သူတို့၏အကောင့်များ၌ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုသို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့ထားသည့်သိုက်များအဖြစ်အစောပိုင်းကငွေပေးချေမှုစတင်ခဲ့သည်။
•နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုResပြီလ ၂ ရက်၊ မတ်လ ၂၆ ရက်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်နှင့်မတ်လ ၁၂ ရက်တို့တွင်စတင်ခဲ့သောအမေရိကန်ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်မှစီးပွားရေးသက်ရောက်မှုငွေပေးချေခြင်းအပိုင်း ၄ ခုတွင်ရရှိနိုင်သည်။
•လူအများစုအတွက်ငွေပေးချေမှုသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်သော်လည်း IRS သည်ပုံမှန်အခွန်အောက်ပြန်ပို့ခြင်းမပြုသူများနှင့် ၂၀၂၀ အခွန်ရှင်းတမ်းကိုတင်ပြရန်စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုငွေပေးချေခြင်းများကိုမရရှိသေးသောသူများအားအောက်ဖော်ပြပါအခွင့်အရေးအောက်တွင်ခံစားခွင့်အားလုံးကိုရရှိရန်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြန်အမ်းငွေ၊ ကလေးအခွန်ခွန်နှင့် ၀ င်ငွေ ၀ င်ငွေခွန်တို့ကဲ့သို့သောအခွန်ခရက်ဒစ်များအပါအ ၀ င်ဥပဒေ။
ငွေပေးချေမှု ၅ ခုသည်paymentပြီ ၁၄ ရက်၊ သောကြာနေ့၊ တရားဝင်ငွေပေးချေမှုရက်စွဲဖြင့်Fridayပြီ ၉ ရက်သောကြာနေ့တွင်အချို့သောလူများသည်အစောပိုင်းကယာယီသိုမဟုတ်ဆိုင်းငံ့ထားသည့်ငွေစာရင်းများတွင်တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာငွေပေးချေခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောနောက်ထပ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။
စုစုပေါင်းဒီအသုတ်အတွက်တန်ဖိုးကို $2ဘီလီယံနှင့်အတူငွေပေးချေမှု 3.4 သန်းနီးပါးပါဝင်သည်။
စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၅၀ တန်ဖိုးရှိငွေပေးချေမှုပေါင်း ၃၂၀,၀၀၀ ကျော်သည်လျော်ကြေးနှင့်ပင်စင်လစာ (C&P) အကျိုးခံစားခွင့်ပေးငွေများကိုခံယူခဲ့ကြသောစစ်မှုထမ်းဟောင်းများထံသို့သွားခဲ့သော်လည်းပုံမှန်အခွန်စည်းကြပ်မှုမတင်သော၊ Non-Filers ကိုအသုံးမပြုခဲ့သူများ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က tool ကို။
စုစုပေါင်းတန်ဖိုးဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလီယံနီးပါးရှိသောငွေပေးချေမှုပေါင်း ၈၅၀,၀၀၀ နီးပါးသည် IRS သည်ယခင်ကစီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုငွေပေးချေရန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်မရှိခဲ့သော်လည်းမကြာသေးမီကအခွန်စည်းကြပ်မှုကိုတင်သွင်းသောအရည်အချင်းပြည့်မီသောပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့သွားခဲ့သည်။
ဤအသုတ်တွင်ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်သူတို့၏ 2019 အခွန်စည်းကြပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ငွေပေးချေမှုရရှိခဲ့သော်လည်းသူတို့၏လတ်တလောပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသော ၂၀၂၀ အခွန်အခအပေါ် အခြေခံ၍ အသစ်သို့မဟုတ်ပိုမိုကြီးမားသောငွေပေးချေမှုကိုခံယူသူများအတွက်ထပ်တိုးထပ်တိုးပေးငွေများလည်းပါဝင်သည်။ ဤအသုတ်တွင်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ ၁.၂ ဘီလီယံကျော်ရှိသည့်“ ပေါင်း -Up” ပေးချေမှုများ၏သန်း ၇၀၀,၀၀၀ ကျော်ပါဝင်သည်။
နောက်ထပ်ငွေပေးချေမှု ၇၂၀၀၀ ကိုလူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့်ရသူများထံသို့သွားခဲ့သည်။ သူတို့သည် ၂၀၂၀ သို့မဟုတ် ၂၀၁၉ အခွန်ရှင်းတမ်းကိုမတင်သွင်းဘဲပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Non-Filers ကိရိယာကိုအသုံးမပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဤပဉ္စမအကြိမ်ငွေပေးချေမှုတွင်တိုက်ရိုက်သွင်းငွေပေးချေမှု ၁.၂ သန်းနီးပါး (စုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံအောက်) နှင့် ၈၀၀,၀၀၀ နီးပါး (စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၄ ဘီလီယံကျော်) ပါဝင်သည်။
အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုစတင်အပေါ်စတင်လုပ်ဆောင်သောအမေရိကန်ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်မှစီးပွားရေးသက်ရောက်မှုငွေပေးချေမှု၏ပထမအပိုင်း ၄ ခုတွင်ရရှိနိုင်သည် ဧပြီလ 2, မတ်လ 26, မတ်လ 19 နှင့် မတ်လ 12.
ငွေပေးချေမှုပမာဏကိုယခင်လည်ပတ်မှုများထက် ပိုမို၍ အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာအမေရိကန်မိသားစုများကိုငွေပေးချေမှုကိုအရှိန်မြှင့်ပေးပြီးမည်သည့်ငွေပေးချေမှုကိုမှတစ်ဆင့်စာဖြင့်သာပေးပို့မည်နည်း။ လူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့်ခံစားခွင့်ရှိသူအားလုံး၏ ၉၅% ကျော်သည်အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာပထမအကိမ်စစ်တမ်းတွင် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ဒုတိယအကိမ်တွင် ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။
IRS သည်စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများပေးချေမှုများအားအပတ်စဉ်ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိငွေပေးချေမှုများကိုအရည်အချင်းပြည့်မီသူများအတွက် IRS တွင်ငွေပေးချေမှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်မရှိသော်လည်းမကြာသေးမီကအခွန်ပြန်အမ်းငွေတင်သွင်းသူနှင့်ထပ်တိုးငွေများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသူများအတွက်ပေးပို့လိမ့်မည်။
လူအများစုအတွက်ငွေပေးချေမှုများသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်သော်လည်း IRS သည်ပုံမှန်အခွန်ရှင်းတမ်းတင်သွင်းခြင်းမပြုရသေးသောသူများအားဥပဒေအရရရှိနိုင်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်အားလုံးကိုရရှိရန် ၂၀၂၀ အခွန်ရှင်းတမ်းကိုတင်သွင်းရန်စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုငွေပေးချေခြင်းများကိုမရရှိသူများအားဆက်လက်တိုက်တွန်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ကဲ့သို့သောအခွန်ခရက်ဒစ်အပါအဝင် 2020 ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြန်ခရက်ဒစ်ဝင်ငွေခွန်ခရက်ဒစ်။ ၂၀၂၀ အခွန်ရှင်းတမ်းကိုတင်သွင်းခြင်းသည် IRS ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်ကလေးအခွန်ခရက်ဒစ်၏ကြိုတင်ပေးငွေကိုရရန်အရည်အချင်းပြည့်မီမှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရာတွင်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ယခုနှစ်နွေရာသီတွင်ပေးလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့သောဖယ်ဒရယ်အကျိုးခံစားခွင့်များလက်ခံရရှိသူများသည် IRS သည်အရည်အချင်းမှီခိုသူအတွက်ငွေပေးချေရန်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုပေးရန်သတင်းအချက်အလက်ပေးရန် ၂၀၂၀ အခွန်ရှင်းတမ်းကိုတင်ပြရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ ဤအုပ်စုမှအရည်အချင်းပြည့်မှီသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်၎င်းတို့အရည်အချင်းပြည့်မှီသောမှီခိုသူများအတွက်အပိုဆောင်းပေးချေမှုတစ်ခုအတွက် ၂၀၂၀ အခွန်ရှင်းတမ်းကိုအမြန်ဆုံးတင်ပြသင့်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်အခွန်ရှင်းတမ်းကိုမတင်သွင်းဘဲဖက်ဒရယ်သက်သာခွင့်များကိုမရရှိသူများသည်ဤစီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုငွေပေးချေခြင်းအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့၊ ကျေးလက်နေဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့်အခြားသူများပါဝင်သည်။ ပထမအကြိမ်သို့မဟုတ်ဒုတိယအကြိမ်စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုငွေပေးချေခြင်း (သို့) အပြည့်အဝပမာဏထက်နည်းသောစီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများမရရှိသူများ၊ 2020 ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြန်ခရက်ဒစ်ဒါပေမဲ့သူတို့က ၂၀၂၀ အခွန်ရှင်းတမ်းကိုတင်ရမယ်။ IRS.gov ၏အထူးအပိုင်းကိုကြည့်ပါ။ အခွန်ရှင်းတမ်းကိုတင်ပြရန်မလိုအပ်ပါက ၂၀ ဝ ၂၀ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အကြွေးတောင်းခံခြင်း.
အခမဲ့ အခွန်ရှင်းတမ်းပြင်ဆင်မှု အရည်အချင်းပြည့်မီသောလူများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
IRS ကအခွန်ထမ်းများအနေဖြင့်ယခုစီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများပေးချေမှု၏ဝင်ငွေအဆင့်အသစ်များပြောင်းလဲသွားသည်ကိုသတိပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအချို့သောစီးပွားရေးသည်စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုငွေပေးချေခြင်းသို့မဟုတ် ၂၀၂၀ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြန်လည်ပေးဆပ်မှုအကြွေးတောင်းခံလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အချို့သောသူများသည်တတိယငွေပေးချေမှုကိုမရရှိနိုင်ပါ။ Adjusted Gross Income (လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်ပူးတွဲလျှောက်ထားမှုအတွက်ဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀) တွင်ဒေါ်လာ ၇၅၀၀၀ (သို့) အထက်ရှိသူများအတွက်ငွေပေးချေမှုများကိုစတင်လျှော့ချလိမ့်မည်။ တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပေးချေမှုသည်ဒေါ်လာ ၈၀,၀၀၀ (လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်ဒေါ်လာ ၁၆၀,၀၀၀) ဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။ ဤအဆင့်ထက်ကျော်လွန်သောညှိနှိုင်းစုစုပေါင်းဝင်ငွေများရှိသည့်သူများသည်ငွေပေးချေရန်မသင့်လျော်ပါ။
တစ် ဦး ချင်းစီသည်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည် ကျွန်ုပ်ငွေပေးချေမှုကိုရယူပါ ဤငွေပေးချေမှုများ၏ငွေပေးချေမှု status ကိုကြည့်ရှုရန် IRS.gov အပေါ် tool ကို။ အပေါ်အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုငွေပေးချေမှု IRS.gov တွင်ရနိုင်သည်။